Ihe a ga-ahụ n’obodo Volendam | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ n’obodo Volendam
Susana Garcia | | Getaways Europe, Holland
Volendam dị ntakịrị obodo ịkụ azụ nke Netherlands, nke dị n'akụkụ Ọdọ Mmiri Markermeer. Obodo a dị n’akụkụ Edam, ma ọ bụbu akụkụ ya dị ka ọdụ ụgbọ mmiri ya, ruo mgbe iwu nke ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ ahụ bịara ma ndị mmadụ biri na mpaghara a ruo mgbe ha mepụtara ọnụ ọgụgụ ndị Volendam.
Nleta Volendam Ọ bụ ihe a na-eme ma ọ bụrụ na anyị nwere ezumike ụbọchị mgbe anyị gara Amsterdam, n'ihi na ọ bụ naanị 22 kilomita site na obodo ahụ, enwere ike iru ya na njem dị mkpirikpi. Ọ bụ ezie na obodo a bụbu ebe onye ọkụ azụ, ọ nwere ọmarịcha mma taa na ọ bụrụla ebe ndị njem nleta ebe ị nwere ike ịchọpụta obere obodo gburugburu Amsterdam.
1 Ihe ịma banyere Volendam
2 Otu esi aga Volendam
3 Lendlọ ngosi Volendam
5 Alinglọ ihe nkiri Palingsound
6 Onye isi oche Vicentius Kerk
7 Marken na Edam
Ihe ịma banyere Volendam
A mụrụ Volendam dị ka Edam ọdụ ụgbọ mmiri, nke mebiri mgbe e mepụtara ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ. Ejiri mpaghara a dika ala juputara na aghaghi iji ya mee ihe ma ndi ozo biri n'ime ha nke mechara chota Volendam, nke putara ihe dika 'mmiri juputara' n'ihi mmalite ya. Taa ọ bụ obodo dị nso na Amsterdam nke kwesịrị ịga leta n'otu ụbọchị. Agbanyeghi na mbido akụ na ụba ya dabere na ọrụ ịkụ azụ na Lake Markermeer, ka oge na-aga, njem ghọrọ ihe ọzọ dị mkpa maka akụ na ụba obodo ahụ.
Otu esi aga Volendam
Njem a na-aga Volendam na-agafe Amsterdam mgbe niile. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị nọrọ n’obodo maka ezumike, anyị nwere ohere ileta ọmarịcha obodo ndị a gbara gburugburu, yabụ ị nwere ike ịhazi otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ iji hụ ha. Gbazite ụgbọ ala bụ nnukwu echiche, n'ihi na ọ bụkwa naanị 22 kilomita site na etiti Amsterdam ma mgbe ahụ anyị nwere ike inwere onwe ịgagharị na obodo ndị ọzọ dịka Edam na gburugburu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị achọghị ichegbu onwe anyị maka mgbazinye ma nweta Google Maps, anyị nwere ike were eriri ụgbọ ala 316 site na ọdụ etiti Amsterdam iji gaa Volendam site na Edam ozugbo.
Lendlọ ngosi Volendam
Muselọ ihe ngosi nka dị n'akụkụ ochie nke obodo ahụ, na ụlọ mara mma ma chọọ mma. N'ime ọ ga-ekwe omume ịhụ ihe ngosi nke ejiji mpaghara site na mpaghara na Netherlands, yana ụfọdụ ọrụ sitere n'aka ndị na-ese ụwa nke sitere n'ike mmụọ nsọ mpaghara ma ọ bụ ọrụ aka. Anyị na-akwado mgbe niile ịkwado oge na ọnụahịa nke ebe ndị ahụ tupu oge eruo, ebe ọ bụ na ozi ahụ nwere ike ịgbanwe dabere na oge. Muselọ ihe ngosi nka a na-emeghekarị site na 10 nke ụtụtụ ruo 17 n'ehihie ma ọnụ ụzọ ya dị ọnụ ala, ihe dị ka euro 2,50, ya mere ọ bara uru ileta na ebe ọ na-adịghị oke ibu ọ gaghị ewe anyị ogologo oge. Nwere ike ịhụ ihe na-atọ ụtọ mgbe niile yana onye maara ma ị ga-alaghachi ebe ahụ.
El Oké osimiri Volendam Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe bara uru n'obodo a. Ebe ọ bụ na ọ bụ obodo na-akụ azụ, ọdụ ụgbọ mmiri ya nwere nnukwu mkpa na ya anyị nwere ike ịhụ ụlọ ndị a na-ahụkarị na ụgbọ mmiri mara mma. Enwere ụlọ ahịa na ụlọ nri ole na ole anyị ga-akwụsị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji nwayọọ. Na Volendam, ha maara na nke a bụ otu n'ime isi ihe siri ike n'obodo ha, ọ bụ ya mere o ji nwee mkpatụ ndị njem. Walkzọ ọzọ ekwesighi ịlafu bụ nke mpaghara akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ, nwere ụlọ mara mma na oghere dị jụụ.
Alinglọ ihe nkiri Palingsound
Nke a bụ ụlọ ngosi ihe nka ọzọ anyị nwere ike ịhụ n'obodo Volendam, nke bụ raara onwe ya nye na egwu. Ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu masịrị gị, ọ nwere ike ịmasị gị, ebe ị nwere ike ịhụ akụrụngwa, akụkọ ihe mere eme na ndekọ sitere n’aka ndị na-ese ihe dị mkpa. Ọnụahịa ahụ dị ala karịa nke ụlọ ebe a na-edebe ihe ochie ma mechie ya na Mọnde.
Onye isi oche Vicentius Kerk
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bi na Volendam bụ ndị Katọlik na chọọchị a dị ebe e wuru nke mbụ. chọọchị Katọlik na 1860. A gbasapụrụ ụlọ ụka a n'ọtụtụ oge ruo mgbe ọ ruru owuwu nke anyị na-ahụ taa, yana ụdị neo-baroque.
Marken na Edam
Ọ bụrụ na anyị gaa ịhụ Volendam, anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ ọbịbịa ngwa ngwa na obodo abụọ ọzọ dị nso na obodo ndị mara mma. Anyị na-ezo aka Marken, nke pụtara na ụlọ osisi ya nke narị afọ nke XNUMX na-ese agba mara mma, nke a na-ahụkarị na Holland. Obodo a maara nke ọma maka ọdịnala ọdịnala ya na ọ bụ ya mere a na-elekwa ya anya. Na nso ị ga - ahụ ọmarịcha Paard Van Marken Lighthouse. N'aka nke ọzọ, anyị nwere Edam, n'akụkụ Volendam, nke ama ama n'ụwa niile maka chiiz gbara gburugburu nke ejiri wax na-acha uhie uhie. Ke July na August ọ bụla Wednesday na ị pụrụ ịnụ ụtọ na ahịa chiiz omenala, ihe omume na-adọta ọtụtụ ndị njem nleta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ihe ị ga-ahụ n’obodo Volendam